Dongeng rapunzel dalam bahasa Malagasi - Sabaya pati sabaya mukti
Dongeng rapunzel dalam bahasa Malagasi
Indray andro, nisy mpivady izay maniry ny hanana ankizy. Nalahelo izy ireo sy ny manirery izay manenika ny tenany rehetra ny fotoana ananany. Fa indray andro any, mahagaga, ny vadiny dia nanana famantarana izay voalaza azy tao bevohoka. Izy ireo ka tena faly ny momba azy io. Mitsambikina izy ireo ka hanao hoe: eny.
Fa ny fahafinaretana izy ireo tsy ho nihazakazaka ela. Aoka ny vehivavy narary. Ny lahy koa sahiran-tsaina satria tsy nisy fanafany, na hanasitrana izay afaka hanampy azy. Fa tampoka nisy vehivavy antitra iray izay nanoro hevitra nandray rampion voninkazo izay ihany no nitombo tao amin'ny havoana.
Ny lahy koa nandeha haka rampion voninkazo mba ho ampiasaina mba hanasitranana ny vadiny. Mampody avy tao amin'ny toerana izay nitombo ny voninkazo dia faritra ny ratsy Magicien nijanona. Ny lehilahy tsy manana safidy hafa, raha tsy nahazo izany, ny vadiny ho faty. Izy tamin'ny farany sahy haka ny rampion voninkazo. Saingy indrisy ny ezaka tsy nahomby, ny ratsy izay nitandrina ny rampion voninkazo nisambotra azy mangalatra voninkazo tao amin'ny saha.
"Ahoana no sahy mangalatra ianao voninkazo ao amin'ny saha !!!" Hoy ny Magicien ny fahatezerana.
"Mety hitondra voninkazo rampion avy ny zaridaina betsaka araka izay ilainao. Ary Izaho koa hamela ny asa momba izany. Fa amin'ny iray fepetra. Tsy maintsy manome ny zaza izay ho teraka amiko. Ary Aza manahy, dia hitondra ny zaza toy ny zaza tahaka ny manokana "hoy ny Magicien.
Ny lahy koa very hevitra. Tatỳ aoriana dia nisafidy ny hanaiky ny fepetra takiana ho an'ny fiarovana ny vadiny, ny tenany sy ny zaza teraka ireo tatỳ aoriana. Ary raha ny zaza teraka, ny ody niseho ary nanome ny zaza no anaran'ny Rapunzel ary haka azy io ho afaka amin'ny fiadiana ny ray aman-dreniny.
Rapunzel nitombo tao an-tovovavy tsara tarehy indrindra. Rehefa 12 taona, ny Magicien mihidy ao ho fiarovana avo amin'ny afovoan'ny ala. Ny tilikambo tsy manana tohatra na varavarana, varavarankely kely ihany tao an-tampon'ny tilikambo izy. Ary rehefa tonga ny mpamosavy mba hitsidika, dia nandidy Rapunzel ho very ny volo.
Ya, Rapunzel i fitahiana amin'ny tsara tarehy ny volo, ny lavany, ary mamirapiratra toy ny volamena. Rapunzel dia tsy maintsy misintona ny volo nidina avy teo amin'ny varavarankely sy ny volony Rapunzel dia ny Magicien afaka mianika teo an-tampon'ny tilikambo izy.
Taorian'ny taona maro ny monina any amin'ny tilikambo, dia tsara tarehy andriana izay nihaza tao anaty ala tsy nahy nandre hira tsara tarehy avy amin'ny tilikambo. Niezaka ny nahita ka te hahazo an-tilikambo nefa tsy nahita ny varavarana na tohatra mba mananika ny tampony. Ary ny mpanjaka dia mamoy fo ary nanapa-kevitra ny handeha an-trano. Fa nandre hira izay nanohina ny fony. Noho izany, isan'andro dia niditra tao anaty ala ka nandre. Indray mandeha dia nahita ody nankany amin'ny tilikambo ka nanao hoe:
"Rapunzel, Rapunzel ,, Ny mandroso ny volo teo ho ahy."
Rapuzel i Tohina sady matahotra rehefa ho tsara tarehy ny fandehany mpanjaka, izay mitsangana eo an-tampon'i. Rapunzel dia tsy mbola nihaona olon-kafa ankoatra ny mpamosavy. Fa ilay andrianan'ny hampandeha tsara ny kabary sy sariaka fanaovana antoka Rapunzel. Ary ny mpanjaka Nilaza ny antony sahy an-tilikambo. Niresaka tamim-pifaliana izy ireo toy izany. Dia efa saiky lavo amin'ny fitiavana tsirairay ao amin'ny fahatsapana voalohany. Rapunzel gaga indrindra ny mpanjaka tatỳ aoriana, rehefa nangataka azy ho vady izy. Ary Rapunzel nilaza eny.
Ary ny mpanjaka dia malahelo sy mamoy fo. Farany, dia nitsambikina teny am-tilikambo mba afa-mandositra ny mpamosavy. Saingy indrisy, ny tsilo nanindrona ho maso roa, rehefa lavo. Ary ny mpanjaka dia nanjary jamba. Dia nalahelo ka nandeha aimlessly hitomany ny hanjo izay very ny vehivavy tiany. Raha mbola mihazakazaka aimlessly; ka mba hitondra azy ho any an-tany efitra izay Rapunzel ao amin'ny setroka. Izany no toerana tsara tarehy ny mpanjaka nandre hira izay tsy hohadinoina. Eny, an'ny ny ankizivavy niarahany dia nihira tsara, Rapunzel.
Izy roa tafaray indray amin'ny farany. Rapunzel mitsahatra mitaraina, toe-piainana izay tiany dia hisy holatra sy jamba. Ny fahagagana nitranga, Rapunzel ny ranomaso nitete ny mason 'ny mpanjaka, ary ny ody ny roa mason'ny mpanjaka nisokatra ary afaka nahita indray izy. Ary ny mpanjaka dia nentina niverina tany Rapunzel an-dapa, ary izy roa lahy niaina tamim-pifaliana mandrakizay.